Biciid - Wikipedia
Biciid lab ah oo ku dhaqan beerta xayawaanka.
Order: Bahda Goodirka
Qoyska hoose: Hippotraginae
Oryx beisa Rüppell 1835
Biciid (Af Ingiriis : Oryx; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa xayawaan ku dhaqan duurka kaasi oo ka mid ah bahda naasleyda ee qaraabada yihiin Goodirka iyo deeroda. Sida ugu badan biciidku wuxuu asal ahaan laga helaa ilaa maantana aad ugu dhaqan yahay qaarada Afrika.
Biciid waa nooc ka mid ah ugaarta. wuxuu leeyahay geeso dhaadheer. waxoo u egtahay sida rida oo kale laakiin woo ka weynyahay. Qabiil ka mid ah qabaa,ilka soomaalida gaar ahaan woqooyiga ayaa la yidhaahdaa Biciide ayagoo loogu magac daray biciidka, maadaama biciidku yahay mid fara badan oo ku noolaanjirey soomaaliya gaar ahaan gobolka Sanaag oo beeshani degan tahay.
Wa antelope saxare ah oo adag. Ugaarsatada ayaa dilay orgigii duurjoogta ahaa ee ugu dambeeyay ee ka badbaaday 1972-kii, laakiin waxaa mahad iska leh dad yar oo ku nool xayawaannada kala duwan, xayawaankan quruxda badan ayaa badbaaday. Hadda waxay si xor ah ugu wareegaysaa dhawr meelood oo la ilaaliyo oo ku yaal Jasiiradda Carabta.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Biciid&oldid=230687"
Last edited on 13 Febraayo 2022, at 08:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Febraayo 2022, marka ee eheed 08:14.